2 Timote 2 - Ny Baiboly
2 Timote toko 2
Famporisihana hiezaka mafy sy hiaritra fanenjehana - Fitsipi-pitondran-tena samihafa.
1Koa ny aminao àry, anaka, dia aoka hihamahery amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesoa hianao; 2ary aoka ny fampianarana renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro, hafindranao amin'ny olona matoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa indray. 3Miareta ny anjara fijalianao amin'ny maha-miaramila tsaran'ny Kristy Jesoa anao. 4Ny miaramila te-hahazo sitraka amin'izay nandatsaka azy, dia tsy mba misy maningo-tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao; 5izay mifaninana hahazo loka amin'ny kianja filalaovana koa tsy mahazo satro-boninahitra raha tsy niady ara-dalàna; 6ary ny mpiasa tany tsy maintsy misasatra aloha, ka rahefa izany vao mandray ny vokatra. 7Diniho izay lazaiko aminao, fa homen'ny Tompo fahalalana amin'ny zavatra rehetra hianao.
8Tsarovy fa Jesoa-Kristy, ilay avy amin'ny taranak'i Davida, dia nitsangana tamin'ny maty araka ny Evanjely torìko, 9izay iaretako fijaliana hatramin'ny fatorana toy ny olon-dratsy aza; ny tenin'Andriamanitra anefa tsy mba voafatotra. 10Noho izany dia miaritra ny zavatra rehetra aho, noho ny amin'ny olom-pinidy, mba hahazoan'izy ireo koa ny famonjena izay ao amin'ny Kristy Jesoa, mbamin'ny voninahitra mandrakizay. 11Teny mahatoky tokoa izao: raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa; 12raha miaritra isika, dia hiara-manjaka aminy; raha mandà azy isika, dia izy koa handà antsika; 13raha mivadika isika, izy tsy mivadika na oviana na oviana, fa tsy mahazo mandà ny tenany.
14Ampahatsiarovy ny olona izany, ary anaro eo anatrehan'Andriamanitra izy mba tsy hiady teny foana, satria tsy mahasoa akory izany, fa mamohehatra ny mpihaino aza. 15Mikeleza aina mba hiseho amin'Andriamanitra ho lehilahy voazaha toetra, sy mpanompo tsy mahazo henatra, ary mizotra mahitsy amin'ny teny fahamarinana. 16Halaviro ireny fibedibedena mandoza ireny, fa mbola handroso ny haratsian'ireny mpanao izany, 17ary mihinana toy ny fery mihady ny tenany; amin'ireny Himeneo sy Fileto, 18izay nania tamin'ny marina, ka milaza fa efa vita sahady ny fitsanganan'ny maty, ary mandrava ny finoan'ny sasany. 19Tsara orina anefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra, sady voaisy tombo-kase hoe: Fantatry ny Tompo ny azy, sy hoe: Aoka hiala amin'ny ratsy izay rehetra manonona ny anaran'ny Tompo. 20Tsy fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao amin'ny trano be soa, fa fanaka hazo sy tany koa, ka ny sasany hajaina, fa ny sasany kosa atao tsinontsinona. 21Koa izay nandio ny tenany ho afaka amin'ireny zavatra ratsy ireny, dia ho fanaka mihaja, voahasina, mahasoa ho an'ny tompony ary voaomana amin'ny asa soa rehetra. 22Andosiro ny filàn'ny tanora fanahy; ary mikatsaha fahamarinana, finoana, fitiavana, ary fihavanana amin'izay miantso ny anaran'ny Tompo amin'ny fo madio. 23Ialao ny ady hevitra adaladala sy tsy misy antony, satria fantatrao ihany fa mahatonga fifandirana ireny. 24Fa tsy mety amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny miady; fa izy tsy maintsy ho olona malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahay mandefitra, 25mananatra ny mpanohitra amin-kalemem-panahy, fa angamba homen'Andriamanitra fibebahana hahalala ny marina izy, 26ka hody ny sainy, ary ho afaka amin'ny fandriky ny demony izy, izay nanao azy sambo-belona mba hanao ny sitra-pony. >